Maitiro Eko B2B Kushambadzira Kubudirira Kunotsamira pane Iyo Yese Sangano | Martech Zone
Chii icho Recipe yeB2B Dhijitari Kushambadzira Kubudirira?
The 2015 Chii Chinoshanda Kupi chirevo chinonzwisisika yanhasi multichannel digital mamiriro Kushanda takabatana Iyo Yekushambadzira Sosaiti uye Denderedzwa Ongororo, Omobono vakaongorora vakuru vakuru makumi matatu nevatatu, muUSA neUK, kuMarketing, Sales, Customer Service, HR neInternational Communications kuti vanzwisise zvirinani zvinangwa zvavo, mabhajeti, zviitiko nemazano / matambudziko.
Heano zvimwe iyo Onobono inopa iyo budiriro:
Kuvaka brand brand ikozvino mutoro wemunhu wese.
Madhipatimendi ese ari uchishandisa makwara edhijitari akasimbiswa.
Kushambadzira kuri kutungamira munzira matsva matsva senge zvemagariro, vhidhiyo, uye mablog (asi ndisina chokwadi nezve kugona).
A yakarongeka dijitari zano ine simba guru.
An nzira yakabatanidzwa inogoneswa nekuva nemutungamiri wepakati, munhu wese anonzwisisa kukosha, rutsigiro rwesangano, kuda kushandira pamwe nekumisikidza zvinangwa uye zvakakosha.
Mhedziso yeshumo inogona kunge ine nharo… kuisa kushambadzira mukutarisira iyo yese B2B Dhijitari Isu. Ini pachangu, ndinofunga zvingave zvakanyanyisa kushinga. Vatengesi vanowanzo kuve vanoshamisa pakuvandudza chiratidzo, asi zvinoda chaizvo kutengesa uye sevhisi kutyaira kumba kuita kwakazara kweiri zano.
Mamwe makambani ari kuronga kuburikidza nepakati Chief Revenue Officer (CRO) kuve nepakati yekuzvidavirira kune vese kuchengetedza, kutora uye kuwedzera huwandu hwakazara hwehukama hwevatengi. Ini ndinofunga ndaizosundira iro zano ndisati ndarikanda rese pakushambadzira.
Tags: b2b kushambadzirab2b kubudirira kushambadzadenderedzwa kutsvagisaMabatiro evatengidigital kushambadzira kubudirirazviwanikwa zvevanhukutaurirana kwemukatiomobonoiyo yekushambadzira nzanga
CommerceHub: Wedzera, Simudzira, Zadzisa uye Nunura